समाजवादी दलदलमा मार्क्सवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
r8s2s@gmail.com प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:४६
असार १६, २०७६ दीप्स शाह
२५ र २१ वर्षीया ती युवतीमध्ये एकको उनकै बंगाली पुरुष साथीले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । ती युवती करिब दुई वर्षअघि रोजगारीको सिलसिलामा ओमान पुगेकी थिइन् र केही समययता काम र कामदाता छोडेर त्यही बंगालीसँग बस्दै आएकी थिइन् ।
अर्की युवतीको शव झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो, जो पर्यटक भिसामा त्यहाँ पुगेर कुनै बंगाली युवकसँगै बस्दै आएकी थिइन् । खबर अनुसार, उनको साथी भनिने बंगाली पुरुष भने उनको मृत्युको केही समय पहिले आफ्नै देश फर्किसकेको थियो ।
यी दुई घटनामा दुइटा समानता छन्— अवैध बसाइ र विदेशी पुरुष साथी ।
कुनै पनि मुलुकमा अवैध तरिकाले रहनु हरेक कोणबाट अत्यन्त असुरक्षित हुन्छ । मातृसत्ता लागू रहेको, लैंगिक हिसाबले हरेक तह र तप्कामा नारी–पुरुषको समान हक सुरक्षित रहेको र मानव अधिकारको उच्चतम सुरक्षा र संरक्षण रहेको इजरायलजस्तो देशमा त कागजात र भिसाविहीन विदेशी कामदारले या त इमिग्रेसनको सुराकी खेप्नुपर्ने या कम पारिश्रमिक र कठिन अनि छनोटविहीन काममा निर्धारितभन्दा अधिक समय पेलिनुपर्ने अवस्था छ भने ओमानजस्तो झनै फरक संस्कृति रहेको मुलुकमा ती युवतीको भोगाइ कस्तो थियो, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अर्कातिर, हिम्मत जुटाएर परदेशसम्मको अज्ञात यात्रामा निस्किसकेका हाम्रा चेलीहरू पुरुषबिना बस्नै नसक्ने हुन् ? पुरुषको आड र साथबिना बाँच्नै नसक्ने हुन् ? कोही पुरुषसँगको शारीरिक सामीप्यबिना के कुनै नारी सास फेर्नै सक्दैनन् ? शरीरको भोककै लागि त्यत्रो जोखिम मोलेर दूरदेश पुग्नु जरुरी छ ?
आफू केका लागि किन त्यो गन्तव्यसम्म पुगेकी हुँं भन्ने बिर्सिएर सीमित रमझममै रम्ने हो भने फेरि दोष कसलाई दिने ? आँगन नाघेर केही गर्ने, आफ्नै खुट्टामा उभिने मौकालाई सदुपयोग गर्ने साहस आफूमा छैन भने कहिलेसम्म दोस्रोलाई गलत बताएर आफूलाई नै बरबाद गरिरहने ?
हो, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा धेरै अबगाल सरकारलाई दिन सक्छौं । हुन पनि सरकार निकम्मै छ । सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार छन् । नियमकानुन अत्यन्तै फितला र सीमित वर्गको पहुँचमा छन् । प्रणाली लथालिङ्ग छ । पाइला–पाइलामा अप्ठ्यारा र निर्विकल्प बाध्यता छन् ।
तर यसो भन्दैमा सबथोक सकिइसकेको पनि त छैन ! बाध्यताका नाममा जुनसुकै तरिकाले कुनै पनि बाटो गरी धूर्त दलालहरूको सम्पर्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा निस्किन पनि त कम से कम केही हजार या लाखको जोहो गर्नुपर्दैन र ? केही लाखसम्मकै जोहो गर्नसक्ने हिम्मत र सम्भावनालाई ‘छाक टार्नसमेत मुस्किल अवस्था’ को बिल्लाले छोपेर हामीले कहिलेसम्म अकाल मरण रोजिरहने ? इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यति रकमले स्वदेशमै केही गर्न नसकिने होइन । खतरा मोलेर अन्धकार गन्तव्यमा भासिनुभन्दा स्वदेशमै, सानै सही, कुनै व्यवसाय गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हो ।
यहीँ जत्ति ज्याला–मजदुरी गर्न पाइन्छ । हाम्रा सहर–बजार झन् यस्तो मलिला छन्, गमलामा फलाएको सागको मुठो बोकेर चोकमा उभिए केही मिनेटमै पैसा फल्छ । हाम्रा गाउँ पनि कम छैनन् । सरकारले केही गरेन भन्दाभन्दै पनि महिला विकास केन्द्रित धेरै योजना गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । केही गर्छु भन्ने आँट र इच्छाशक्ति भएका महिलालाई अनुदानका, साना उद्यमका धेरै कार्यक्रम छन् । जिन्दगीकै बलि चढाउनुपर्ने गन्तव्य ताक्नुभन्दा पाखुरा खियाएर स्वदेशमै बाँच्ने योजना ठीक होइन र ?
अवैध बाटाको वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बाध्यता हो भन्छन् कतिपय । तर मलाई लाग्छ, यो धेरै हदसम्म हाम्रो विलासी मानसिकताको उपज हो । रमझममा बाँंच्ने लालसाको नतिजा बनिरहेको हुनसक्छ, यो रहर । छिट्टै माथि पुग्ने अधकल्चा सपनाका लागि खतरनाक भर्‍याङ चढ्नु बुद्धिमत्ता होइन । दुःख सही, स्वाभिमानमा रमाउन सिकौं । नमीठो सही, इमानदार कमाइमा स्वाद लिन सिकौं । ठूला सपना देख्नुअघि त्यसको परिणाम अनुमान गरौं । अवैध बाटो अज्ञात गन्तव्यतिर लम्किनुअघि आफ्नाहरूको याद गरौं र धेरै सोचविचार गरेर मात्रै कदम अघि बढाऔं ।
प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:४३